प्रहरीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ, खनाल जी अख्तियारमा जाने सपनामा अपहरणकारी नबन्नुस् - Nepal Khoj
होम / हाइलाइट-समाचार / / प्रहरीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ, खनाल जी अख्तियारमा जाने सपनामा अपहरणकारी नबन्नुस्
प्रहरीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ, खनाल जी अख्तियारमा जाने सपनामा अपहरणकारी नबन्नुस्
२०७७ बैशाख १२ , शुक्रवार प्रकाशित
काठमाडौं । ‘डा सुरेन्द्र यादव अपरहणमा परे’ भन्ने सनसनी फैलियो । पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ट्वीटरबाट सन्देश प्रवाह गरेपछि नेपाली सञ्चार माध्यम तात्यो । लकडाउनका समयमा पनि सांसद अपहरण । समाचार सत्य होस् वा बनावटी । सामाजिक सञ्जाल एकै छिन्मा रङ्गिग बन्न पुग्यो । तर महत्वपूर्ण कुरा के भयो भने अपहरणकारी चानचुने मान्छै छँदै थिएनन् । यो देशका सुरक्षा अंगको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ थिए भनियो ।
यो नाम वा त्यो नाममा डा सुरेन्द्र यादव अपहरणमा परेको हो भने अपहरणमा संलग्न तीन जनालाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा केही आफ्ना कुरा राखेके कारण पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई सरकारले थुनामा राख्न सक्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ट्वीट अनुसार बस्नेत, श्रेष्ठ र खनाल तीनै जना यतिखेर प्रहरी खोरमा हुनु पर्ने थियो ।
यद्यपी त्यसो भएको छैन । किनकी यो देशको कानून सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने विगतको उखान अहिलेसम्म पनि उत्तिकै बलियो देखिएको छ ।
जे होस् सांसद अपहरणमा परेका नाटक होस या साँच्चै नै यस्ता धेरै नाटकहरु बेला बेलामा रचिएका छन् । २०५४ सालमा महाराजगञ्ज स्थित तात्कालिन काठमाडौं होटलमा सांसद किनबेचमा आपूm नै संलग्न भएको र सिरानीमा पैसा राखको त्यसबेलाका महानगरप्रमुख केशव स्थापितले खुल्ला रुपमा नै भाषण गरेका थिए । यो देशका राजनीति गर्नेहरुले देश र जनताका माया होइन, पैसा र पदलाई मात्र मान्ने गरेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो त्यसबेला देखि अहिलेसम्म ।
तर, विडम्वना । यो देशको सुरक्षा निकायको प्रमुख भएर बसेका व्यक्ति अपहरणमा संलग्न भएको समाचार प्रकाशित हुनु लज्जास्पद भन्दा पनि अरु के हुन सक्ला र ? हो प्रहरीका त्यस्तो धेरै उच्च अधिकारी बहालवाला हुन् या पूर्व अधिकांश कुनै न कुनै राजनीतिज्ञको कठपुतली बनिरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले सर्वेन्द्र खनालले पुष्टि गरिदिएका छन् ।
देश कोरोना संक्रमणको त्राहि त्राहिमा छ । जनता घरभित्रै लकडाउनमा छन् । घरबाहिर निस्के प्रहरी लाठी बजार्छ तर त्यही प्रहरीको पूर्व हाकिम उदारो पदका लागि मान्छे अपहरणमा संलग्न भएको भनिन्छ । आज पर्यन्त प्रहरीको नियतीमाथि कुनै बेला प्रश्न नउठेको पनि होइन । प्रहरी प्रमुखहरुले आफ्नो हैसियत विर्सिएर कठपुतली बन्दा यस्ता घटनाहरु पटक पटक दोहोरिने गरेका पनिछन् जुन दोहोरिन हुँदैनथ्यो ।
प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल यति तलसम्म झरेर काम गर्दछन् भन्ने कुरा सायद कसैले विश्वास गर्दनथ्यो, तर पुष्टि भयो । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको बलात्कार पछि हत्यो भएको घटनाका दोषी अहिलेसम्म पक्राउ परेन । पर्न सक्थे सायद खनालले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम गरेर कुनै अमूक व्यक्तिको कठपुतली नबनिदिएको भए ।
भ्रष्टाचारमा त कोही अपहरणमा परेका कारण नै लकडाउनमा भोक र प्यासमा जनताका सुरक्षमा खटिएका प्रहरीको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । खनालजी तपाइँ अख्तियारका आयुक्त खाने लोभमा यतिसम्मको निकृष्ट कार्य नगर्नुस् । सपना त्याग्नु् अख्तियारमा जाने । तपाई यो देशको प्रहरी प्रमुख भईसकेको मान्छे तनहुँका खनालको बेइज्यत नगर्नुस् ।
आफ्नो छातिमा हात राखेर कसम खानुस् र एक पटक सोच्नुस प्रहरीमा जागिर खाएर अहिलेसम्म कतिले कठपुतली बनाईसके ? कहिलेसम्म कठपुतली बनिरहनु हुनेछ । देशको माटोले सराप्ने तपाइँलाई देश बेच्न खोज्ने दलालीहरुको कठपुतली नाचमा नरमाउनुस् । तपाइँ कुनै हालतमा पनि अख्तियारमा आयुक्त हुनु हुने छैन । देशको सच्चा सिपाही भएर अस्कल कलेज पढ्दाको दिन स्मरण गर्नुस् अनि साँच्चै देश जोगाउनेतिर लाग्नु्स् । एउटा पदका लागि हजारौ प्रहरीको आत्मसम्मान चोट पु¥याउन छाड्नुस् ।
लकडाउन उल्लंघन गर्ने बढ्दै
टीकापुर पनि रहेन कोरोनाबाट अछुतो, चारजनामा कोरोना पुष्टि
संघीयता खारेज गर्ने प्रावधानसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा जनमोर्चा
राष्ट्र बैंकले ल्यायो पुनःकर्जा कार्यविधि, साना उद्योगले १५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने